११ बुदे सहमति जनकपूर पुगेर सिके राउतले तोडे पछी, युवाले थर्काउदै भने सरकारले सच्याउनैपर्ने कुराहरु यस्तो छ
एच बी ताम्राकार,
सिके राउतले हस्ताक्षर गरेको ११ बुदे सहमतिको जनकपूरमा पुग्ने बितिक्कै धज्जी उड़ाए। यो सिकेको सहमतिको नाउमा “मधेश” लाई छुट्टै देश बनाउने ग्रैण्ड डिजाईन् हो। सहमति गरे जस्तो गर्ने र कार्यकर्ता लाई “Free Madhesh” को नारा बोल्न लगाउने र झण्डा उचाल्न लगाउने दोहोरो भुमिका हो। हाम्रा देशका नेताहरु लाटा देखिएकै हुन् त ? एक सिके राउतको पञ्जामा खेल्न पुगेकै हुन त? कुरा गम्भिर देखियो। सिके रावत जी को काठ्माण्डौमा एउटा अनुहार र तराई झर्ने वितिक्कै दोस्रो देखियो। नेकपा मौन बस्दा नारायण क़ाज़ी श्रेष्ठ र भिम रावलले बिरोध गर्ने साहस गरे। सलाम छ दुवै कमरेडहरुलाई ।